VONDRON’NY TANGALAMENA SY TANORA AO TOAMASINA II : Mitaky ny fametraham-pialan’ i Rajaonarimampianina
Manao rano lava ny fanehoan-kevitra momban’ny raharaham-pirenena. Tsy diso anjara amin’izany ny ao Toamasina II. 13 avril 2018
Manoloana ny fankatoavan’ireo solombavambahoaka mpiandany amin’ny fitondrana ilay lalàm-pifidianana naroson’ny fitondrana, dia nivoaka tao anatin’ny fahanginany ireo vondron’ny tangalamena sy vondron’ny tanora ao anatin’ny distrikan’i Toamasina II. Nisy ny fanaovan’izy ireo fanambaràna iraisana.
Ho an’ny vondron’ny Tangalemana, dia nitarika izany i André Robert avy amin’ny kaominina Antetezambaro. Ho an’ny tanora kosa, dia notarihin’i Gerald raha i Vague izay avy ao Foulpointe no nisolotena ireo vehivavy avy ao Toamasina II. Nandritra izany no nilaza’izy ireo ny fanohanana 100% ireo solombavambahoaka 73 nijoro nanohitra ilay lalàm-pifidianana Hvm.
Nitodika manokana tamin’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ireto tangalamena sy tanora avy ao anatin’ny distrikan’i Toamasina II ireto mba tsy hankato io lalàm-pifidianana io. Ny fankatoavan’ny Hcc io lalàm-pifidianana io dia mira fankatoavan’ny Hcc korontana eto amin’ny firenena, hoy hatrany ny fanazavana.
Nahitsy ireto tangalamena sy solontenan’ny tanora avy ao Toamasina II ireto nilaza fa taratry ny tsy fankasitrahan’ny vahoaka Malagasy ny fitondrana mijoro izao fanoherana lalàm-pifidianana izao ka raha olon-kendry ny filoha Rajaonarimampianina, dia tsara ho azy ny mametra-pialana dieny mbola tsy vaky ny korontana. Tompon’andraikitra amin’ny mety hisian’ny korontana eto Madagasikara ireo solombavambahoaka nampandany ilay lalàm-pifidianana, ny Hcc ary ireo forongon’ny Hvm, hoy hatrany ireto olobe sy tanora avy ao Toamasina II ireto.
VONDRON’NY TANGALAMENA SY TANORA AO TOAMASINA II
2018-04-13 18:41:11 par bordeaux 3300
Très très et mille fois très bien les tamataviens.Gaza matahotra miteny.aza avela fa rebirebeo ao art Gaza matahotra na esoriny koa i elize karah ataony an i moktar fa TS maints hoavy fotoana MBA hagnanaovan tsika valifaty am 4 maso tsy mijary tombontsoam bahoaka afa TS tombotsoany sy NY équipe NY am are an tsika
2018-04-13 19:28:19 par bordeaux 3300
Aoka MBA samy alaka antsaina tsara sy hi repere tsara ireo solo bavam bahoaka izay avy amintsika am faritra ka namadoka fitokisan tsika anjareo ka lasa nagnano pute nagnano makorely Any am hvm ka mitavana harena sy volan tsika vahoaka MBA anjara tsika no mi régler conte tsika ami n izy ireo atsika refa misolo’ny président.tsy Joe hamono fa MBA tsy hifidy ireny itsony sy MBA hanoneran izy ireo volcan tsika vahoaka ozay niarahan izy ireo tamnrajao